LG V30S ThinQ သည်အသိဉာဏ်ရှိသောမိုဘိုင်းလ်ဖြစ်သည် Gadget သတင်း
LG V30S ThinQ သည်အသိဉာဏ်ရှိသောမိုဘိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်
LG သည် MWC 2018. အတွက်အံ့အားသင့်စရာတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ LG V30S ThinQ။ ဤမိုဘိုင်းသည် LG V30 ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးသားပါက၊ ၎င်းသည်မူလမော်ဒယ်၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများစွာကိုမျှဝေပေးသောမိုဘိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
LG V30S ThinQ သည်ကြီးမားသောမိုဘိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏မျက်နှာပြင်အထိရောက်ရှိနိုင်သည့် ထောင့်ဖြတ် ၆ လက်မနှင့် QuadHD + resolution (၂,၈၈၀ x ၁၄၀၀ ပစ်ဇယ်) သည်တစ်လက်မလျှင် ၅၃၈ pixel ၏သိပ်သည်းဆကိုရရှိစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်မူရင်းမော်ဒယ်တွင်အသုံးပြုထားပြီးဖြစ်သော FullVision သည်၎င်း၏ဖန်သားပြင်ပုံစံသည် ၁၈: ၉ ဖြစ်သည်။
1 RAM memory နှင့် storage - ဟာ့ဒ်ဝဲအဆင့်မှာကြီးမားတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုများ
2 LG V30S ThinQ ၏ဓာတ်ပုံအပိုင်း - အလိုလိုသိသောဓာတ်ပုံ
3 Voice AI - နောက်ခံတွင် Google Assistant ဖြင့်အသံအမိန့်ပေးသည်
4 စစ်ဆင်ရေး ၁၄ ခုကိုကျော်ဖြတ်နိုင်သည့်ကြမ်းတမ်းသောမိုဘိုင်း
RAM memory နှင့် storage - ဟာ့ဒ်ဝဲအဆင့်မှာကြီးမားတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုများ
ယခု LG V30S ThinQ သည်ခြားနားမှုတစ်ခုရှိပါက၎င်းသည်၎င်း၏ RAM memory နှင့် internal storage capacity ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည် RAM ၏6GB ကိုရောက်ရှိ ဖိုင်များကိုသိမ်းဆည်းရန်စွမ်းရည်မှာ ၁၂၈ ဂစ်ဖြစ်သည်။ ၂၅၆ GB ဗားရှင်းလည်းရှိသည်။ 128 TB အထိသိုလှောင်နိုင်သည့် MicroSD ကဒ်များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ကိုရီးယားနှစ်ကဒီလွှတ်တင်မှုနဲ့အတူစွန့်စားချင်တယ်။ ဒီပရိုဆက်ဆာကနောက်ဆုံးပေါ် Qualcomm မော်ဒယ်မဟုတ်တော့ဘူး။ Snapdragon 845 Snapdragon 835 ဘယ်လိုမြင့်မားတဲ့အကွာအဝေး၌ပေးတော်မူပြီဘယ်လောက်ကောင်းသောရလဒ်များကို။
LG V30S ThinQ ၏ဓာတ်ပုံအပိုင်း - အလိုလိုသိသောဓာတ်ပုံ
နောက်ကျောမှာနှစ်ဆရှိလိမ့်မယ် သင့်ကင်မရာအတွက်အာရုံခံကိရိယာ။ ၎င်းတွင် 16 နှင့် 13 megapixels resolution ရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ပုံများ၏နက်ရှိုင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူကစားနိုင်ခြင်း - စျေးကွက်တွင်စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အရှေ့ဘက်တွင်5megapixel resolution ရှိသောဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများသို့မဟုတ် selfies များအတွက်နောက်ထပ်ကင်မရာတစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ အခုတော့ကင်မရာမှာလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တွေထပ်ထည့်တယ်။ တိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင်သုံးခုရှိတယ်။ ပြီးတော့သူတို့ကိုအမည်ပေးထားတယ်။ AI CAM, QLens နှင့် Bright Mode.
ပထမတစ်ခု (AI CAM) သည် frame ၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးနှင့်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဆန်းစစ်သည် အသုံးပြုသူအားနောက်ဆုံးရလဒ်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန်အကြံပြုသည်။ ဤရွေ့ကား Modes သာဖြစ်နိုင်သည်: ပုံတူ, အစားအစာ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ, ရှုခင်းများ, မြို့, macro, နေထွက်သို့မဟုတ်နေဝင်ချိန်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Qlens သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်ယူမှုများတွင်အတုထောက်လှမ်းရေးကိုကူညီလိမ့်မည်။ LG V30S ThinQ ကင်မရာဖြင့် QR ကုဒ်တစ်ခုကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်၎င်းသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုပြန်ပို့ပေးမည်ဖြစ်သည် သင်၏အွန်လိုင်းဝယ်ယူမှုအတွက်ရွေးချယ်စရာများသိုမဟုတ်အလားတူကုန်ပစ္စည်းများအတွက်အကြံပြုချက်များ.
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Bright Mode သည်အလင်းနည်းသည့်မြင်ကွင်းများတွင်ကောင်းသောရိုက်ချက်များရလိုသည်။ သို့သော် LG V30S ThinQ နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမှခွဲခြားရန်ဖြစ်သည် နှစ်ခုအချက်တစ်ချက်နှင့်အတူဖမ်းမိပုံရိပ်တွေကိုထွန်းလင်းရန် algorithms တစ်စီးရီးကိုသုံးပါလိမ့်မယ်.
Voice AI - နောက်ခံတွင် Google Assistant ဖြင့်အသံအမိန့်ပေးသည်
Voice Command သည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အနာဂတ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ LG ကဒါကိုသိတယ်။ ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ် Google ကလက်ထောက်ဂူဂဲလ်ပလက်ဖောင်းတွင်နောက်ဆုံးပေါ်လာသည့် LG သည် LG V30S ThinQ တွင်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များကိုပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်သုံးစွဲသူသည်မျက်နှာပြင်ကိုထိစရာမလိုဘဲ voice commands များမှတဆင့် menu options များကို ၀ င်ရောက်နိုင်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ဤအရာအားလုံးသည် LG အတွက်သာဖြစ်သည် ဒီကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏အခြားမော်ဒယ်များမှတိုးချဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဤအကြောင်းကို၎င်း၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်မှတ်ချက်ပေးသည် ဆော့ဖျဝဲ, ဒါပေမယ့်အကြောင်းကိုဘာမှအပေါ်မှတ်ချက်ပေးမထားပါဘူး အချိန်ကိုက်.
စစ်ဆင်ရေး ၁၄ ခုကိုကျော်ဖြတ်နိုင်သည့်ကြမ်းတမ်းသောမိုဘိုင်း
ဒီနေ့သုံးစွဲသူသည်မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆိုသူ၏မိုဘိုင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ဒါကြောင့်စျေးကွက်မှာစတင်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းသစ်ကိုအကောင်းဆုံးအခြေအနေနဲ့ဘယ်အခြေအနေမှာမဆိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ LG ကဒီရှုထောင့်ကိုသတိထားမိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ဤ LG V30S ThinQ ကိုခက်ခဲစေသည်။ ထို့အပြင်သူသည်စစ်ရေးစမ်းသပ်မှု ၁၄ ခုကိုအောင်မြင်ခြင်းဖြင့်သက်သေပြခဲ့သည်။ ချေးခံနိုင်မှု၊ ဖုန်မှုန့်စစ်ဆေးခြင်း၊ စမ်းသပ်မှုများကျဆင်းခြင်း; မိုးရေစမ်းသပ်မှုများ၊ အစွန်းရောက်အပူချိန်ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုစသည်တို့.
ယခုအချိန်တွင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည် LG V30S ThinQ ၏စျေးနှုန်းကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးပေ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်မူရင်းမော်ဒယ်၏ဈေးနှုန်းကိုအခြေခံထားလျှင်၊ ဤသည်စတင် 800 ယူရိုကျော်လွန်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအချက်အလက်များကိုရရှိပါကလာမည့်နေ့ရက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီးသင့်အား၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » LG V30S ThinQ သည်အသိဉာဏ်ရှိသောမိုဘိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်